राजस्थानमा बन्दी बनाएर राखिएका थिए चिनियाँ मूलका ३ हजार मानिस ! « गोर्खाली खबर डटकम
राजस्थानमा बन्दी बनाएर राखिएका थिए चिनियाँ मूलका ३ हजार मानिस !
काठमाडौं। कुरा १९ नोभेम्बर १९६२ को हो । अचानक दिउँसोमा शिलोंगको डन बस्को स्कुलमा भारतीय सेनाको एक टोली पुग्यो र उनीहरुले त्यहाँ पढिरहेका चिनियाँ मूलका विद्यार्थीहरुलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्न सुरु गरे । उनीहरुमध्ये उक थिए १६ वर्षका यिंग शेंग वांग । भोलिपल्ट अपरान्ह साढे ४ बजे भारतीय सैनिकको एक टोलीले शिंगको घरको ढोका ढक्ढक्यायो । उनीहरुले परिवारलाई आफूसँग हिँड्न भने । सिपाहीहरुले शिंगका पितासँग भने साथमा केही सामान र पैसा राख्नू ।
त्यस दिन यिंग शेंग वांगको परिवारलाई, जसमा उनका मातापिता चाइ दाजुभाइ र जुम्ल्याहा दिदीबहिनी थिए, हिरासतमा लिइयो । उनीहरुलाई शिलोंग जेल लगियो । इतिहासको यो घटनाबारे ‘द देवली वालाज’ नामको किताबका लेखक दिलिप डिसूजा भन्छन् ‘१९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो । त्यतिबेला भारतमा बसिरहेका चिनियाँ मूलका मानिसहरुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको थियो । यीमध्ये धेरैजसो ती मानिसहरु थिए जो भारतमा पुस्तौंदेखि बसिरहेका थिए र केवल भारतीय भाषा बोल्थे ।
भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनले ‘डिफेन्स अफ इण्डिया एक्ट’मा हस्ताक्षर गरेका थिए जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई दुश्मन देशको मूलको भएको शंकाको आधारमै गिरफ्तार गर्न सकिन्थ्यो । यसअघि अमेरिकाले पनि १९४२ मा पर्ल हार्बर आक्रमणपछि त्यहाँ बसिरहेका करिब १ लाख जापानीहरुलाई यस्तै गरी हिरासतमा लिएको थियो ।
वांग परिवारलाई ४ दिन शिलोंग जेलमा राखेपछि गुवाहाटी जेल पठाइयो । त्यहाँ ५ दिन बिताएपछि उनीहरुलाई रेलवे स्टेशन लगियो । त्यहाँ एउटा ट्रेनले उनीहरुको प्रतिक्षा गरिरहेको थियो । यो ट्रेन माकुम स्टेशनबाट सुरु भएको थियो । त्यो ट्रेनमा हिरासतमा लिइएका सयौं चिनियाँ मूलका मानिसहरुमध्ये ‘द देवली वाला’ पुस्तककी सह लेखिका जोय माकी आमा एफा मा पनि थिइन् ।
दार्चुला जिल्लामा स्क्रबटाइफसका बिरामी बढ्दै गएका छन् ।